Baby Magic Gift Bag Set - Assorted | Buy online | SHOP.COM.MM
Baby Magic Gift Bag Set - Assorted
9 oz Soft Powder Scent Hair and Body Wash
2 oz Orignial Baby Lotion
2 oz Soft Powder Scent Hair and Body Wash
Squeaky Duck Pouf
Baby Magic - Gift Bag Set
Baby Magic - Gift Bag Set လေးက အစုံ ပါတယ်။ လက်ဆောင် ပေးရတာလဲ လှတယ်။ Read more Hide
Hnin Yu Ya Khine
Baby Magic ရဲ့ Gift Bag Set ကြောင့် ကလေးမွေးနေ့သွားတိုင်း အရမ်းအဆင်ပြေသွားပါပြီ။ အရမ်းစဉ်းစားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ Read more Hide
ဒီလက်ဆောင်ထုပ်လေး ကလေးမွေးပြီးသား မိတ်ဆွေတွေဆီ အလည်သွားရင်မဆိုးဘူး
baby magic က တန်လည်းတန်ကလေးအတွက်စိတ်လည်းချရတယ် Read more Hide
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံနဲ့ Baby Magic
ကလေးသုံးအလှကုန်လေးတွေ အများကြီးပါတော့ လက်ဆောင်ပေးရတာလဲ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ Baby Magic ရဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ အရည်အသွေးလဲ တကယ်ကောင်းတယ်။ Read more Hide
ဒီ Baby Magic Gift Bag Set လေးက ကလေးတွေအတွက် လက်ဆောင်ပေးလို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ Read more Hide
Baby Magic’s Bathing Basics Bag baby bath set includes everything mommy and baby need to stay clean and have fun in the tub! Moisturize and cleanse your baby’s skin with our gentle lotions and easy to rinse, vitamin enhanced washes. Baby Magic is gentle for all skin types and has that wonderful baby scent mommies have loved for generations. This product can be used safely during five years from manufacturing date.
Alcohol ၊ Paraben ၊ Gluten
Specifications of Gift Bag Set - Assorted